Masuuliyiinta Xisbiga KULMIYE laantiisa Finland oo Yeeshay Shir ay Kaga Arrinsannayeen Dardargelinta Hawlaha Xisbiga | Hangool News
Masuuliyiinta Xisbiga KULMIYE laantiisa Finland oo Yeeshay Shir ay Kaga Arrinsannayeen Dardargelinta Hawlaha Xisbiga
Helsinki(Hangoolnews) Guddiga Fulinta xisbiga KULMIYE ee laantiisa Finland, ayaa isugu yimi kulan ay kaga arrinsadeen dardargelinta hawlahooda shaqo iyo shirarka laantaasi qabsato.
War-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga Kulmiye laantiisa waddanka Finland, gaar ahaana caasimadda dalka Finland ee Helsinki oo lagu faahfaahiyey shirkaasi iyo arrimihii lagaga hadlay, waxa uu u dhignaa sidan;
“Annagoo ah guddida fulinta Xisbiga Kulmiye laantiisa Finland oo isugu nimi shir ay guddidu ay kaga arrinsinaysay shirkii billaha ahaa ee laanta xisbiga kulmiye ee dalka Finland.
Shirkan oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha iyo guddoomiye-ku-xigeenka laanta xisbiga Kulmiye ee waddanka Finland – Eng. Maxamed Cabdillaahi Axmed iyo Xamse Mahdi Ibraahim iyo weliba Afhayeenka laanta Maxamed Xasan Cali Waraabe, waxa lagaga hadlay arrimaha shirka billaha iyo sii wadida hawlaha xisbiga u yaala, isla markaana loo dardargelin lahaa qorshayaasha cusub ee laantu ka shaqaynayso oo lagu soo hadal qaaday shirkan.
Qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagaga dooday ayaa salka ku hayay sidii guddi qabanqaabo loogu sameyn lahaa shir sannadeedka xisbiga ee aalaab la qabto sannad kasta.
Sidoo kale, shirwaynihii xisbiga ee laanta oo dhacaya bisha 5aad ee sannadkan aynu ku jirno si markaa loo sameeyo tirikoob xubnihii shirkaa ka qaybgali lahaa ee markaasi ka kala iman lahaa guud ahaan degmooyinka iyo gobollada dalka Finland. Sidoo kale, waxa xisbiga Kulmiye laantiisa xafiis wayn oo uu yeelan doono xisbiga Kulmiye Finland.
Ugu dambeyntii shirkaasi waxa uu ku soo gabagaboobay is afgarad iyo jawi aad u degan.”